ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်းကမ်းလွန်နိုင်ငံတကာ & ပုဂ္ဂလိကအဘို့ဘာဘေးဒိုးစမဲ့ကိုးစားလော့
တစ်ဦးဘာဘေးဒိုးစ Trust မှနိဒါန်းဖွဲ့စည်း
A ဘာဘေးဒိုးစမဲ့ကိုးစားလော့ privacy ကို, (အချို့နိုင်ငံများ၌အကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်) အခွန်လျှော့ချအတှကျအသုံးပွုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနိုင်ပါတယ်။ ဘာဘေးဒိုးစ်ကျွန်းမှာလည်းလူကြိုက်များသောအနေနဲ့ကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်အများအပြားနိုင်ငံခြားသားတွေကအသုံးပြုသည်၎င်း၏နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC) ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်လည်းလူသိများသည်။
, ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိက, ကမ်းလွန်နှင့်နိုင်ငံတကာကိုး စား. : ဘာဘေးဒိုးစကိုး စား. လေးခုကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများဖွဲ့စည်းရေးအဘို့ခွင့်ပြုဥပဒေများရှိပါတယ်။ အဆိုပါများမှာနိုင်ငံခြားသားများအများဆုံးသက်ဆိုင်ရာ ကမ်းလွန်ယုံကြည်မှု, နိုင်ငံတကာယုံကြည်မှုနှင့်ပုဂ္ဂလိကယုံကြည်မှု။
ဘာဘေးဒိုးစကမ်းလွန် Trusts မှ
ဘာဘေးဒိုးစကမ်းလွန် Trusts မှကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှသာ passive ဝင်ငွေ deriving ရိုးရာပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း Trusts မှဖြစ်ကြသည်။ 2002 ၏နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးန်ဆောင်မှုများအက်ဥပဒေ (IFSA) သာဘာဘေးဒိုးစပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များထံမှနိုင်ငံခြားငွေကြေးနှင့် / သို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားအာမခံအတွက်ရန်ပုံငွေလက်ခံသောကမ်းလွန် Trust မှတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကမ်းလွန် Trusts မှလည်း (ရွှေ့ပြောင်းနှင့်ယိမျးမယို) နိုင်ငံခြားဂုဏ်သတ္တိများသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားအိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်မှုကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်။ သူတို့တစ်တွေဘာဘေးဒိုးစအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC) ပိုင်ဆိုင်နှင့်ဘာဘေးဒိုးစအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးန်ဆောင်မှုများအက်ဥပဒေဝင်ငွေအခွန်မှကင်းလွတ်ခွင့်ကိုအော IBC စီမံနိုင်သည်။ ကမ်းလွန် Trusts မှအားလုံးဘာဘေးဒိုးစအခွန်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ယုံကြည်မှု၏ဤအမျိုးအစားအစိုးရနှင့်မှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်မည်သည့် file ကိုလုပ်ဖို့မရှိပါ။ အဆိုပါ Trustee အဆိုပါ IFSA အောက်မှာလိုင်စင်ရရမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့သက်တမ်း 80 နှစ်ပေါင်းအထိဖြစ်ပါတယ်။
ဘာဘေးဒိုးစအင်တာနေရှင်နယ် Trusts မှ
1995 ၏နိုင်ငံတကာ Trust မှအက်ဥပဒေ (ITA) တိကျသောအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများသို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကိုင်ဆောင်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဲဒါကို set ကိုရည်ရွယ်ချက်မျှမအမည်ရှိသောအကျိုးခံစားခွင့်မျှမဖြင့်ဖွဲ့စည်းနိုင်ပါသည်ကြောင့်စုံလင်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း Trust မှဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မည်သည့်ဝင်ငွေဘာဘေးဒိုးစအတွင်းပိုင်းရရှိသောသို့မဟုတ်ဘာဘေးဒိုးစနေထိုင်သူများမှလွတ်ထက်အခြားအခွန်အခများမှဘာသာရပ်မဟုတ်ပါဘူးဘာဘေးဒိုးစအတွက်အခွန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် non-အတည်တကျနေထိုင်ရာမြို့ရွာဆင်ခြင်၏။ တစ်ဦး, ITA များအတွက်အရည်အချင်းတစ်ဦးဘာဘေးဒိုးစနေထိုင်သူဖြစ်အနည်းဆုံးဂေါပကလိုအပ်သောတည်ထောင်သူ (Settlor) နှင့်အကျိုးခံစားရသူများတစ်ဦးဘာဘေးဒိုးစနေထိုင်သူများမဖွစျနိုငျ, ယုံကြည်မှုကိုတူရိယာတို့သည်, ITA အုပ်ချုပ်ကြောင်းသတ်မှတ်ပါတယ်, နှင့်မျှမတို့ဘာဘေးဒိုးစယိမျးမယိုဂုဏ်သတ္တိများပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ဒါကအစိုးရနှငျ့မှတျပုံတငျဖို့လိုအပ်တစ်ခုတည်းသောယုံကြည်မှုဖြစ်ပါသည်, သို့သော်၎င်း၏မှတ်တမ်းများအများပြည်သူရရှိနိုင်ပါသည်လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်း၏သက်တမ်း 100 နှစ်အထိကျနိုင်ပါတယ်။
ဘာဘေးဒိုးစပုဂ္ဂလိက Trusts မှ
2012 ၏ပုဂ္ဂလိက Trust မှကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေဘာဘေးဒိုးစအတွက်ဝင်ငွေအခွန်နှင့်အရင်းအနှီးအကျိုးအမြတ်အခွန်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ဖြစ်သောပုဂ္ဂလိက Trust မှကုမ္ပဏီများ (PTC) ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ တစ်ဦးက PTC အခြေခံအားဖြင့်တိကျတဲ့ယုံကြည်မှုသို့မဟုတ်အများအပြားဆက်စပ်ကိုးစားရန်ယုံကြည်မှုအုပ်ချုပ်ရေးန်ဆောင်မှုပေးမယ့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ချမ်းသာကြွယ်ဝမိသားစုများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိက, ဒါမှမဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိုး စား. များအတွက် Trustee အဖြစ်ပြုမူဖို့ဘာဘေးဒိုးစ PTC ဖန်တီးပါ။ ဒီအပေါငျးတို့သကိုး စား. ၏တည်ထောင်သူ (Settlor) သူတို့၏ဂေါပကကျော်ပြည့်စုံထိန်းချုပ်မှုရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဘာဘေးဒိုးစကာရစ်ဘီယံပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးကျွန်းတစ်ကျွန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဒါဟာ 1966 အတွက်လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ရာဟောင်းတစ်ဦးကဗြိတိသျှကိုလိုနီဖြစ်ပြီးလက်ရှိဗြိတိသျှဓနသဟာယ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဘာဘေးဒိုးစ Trust မှအကျိုးကျေးဇူးများ
ဘာဘေးဒိုးစ Trusts မှ : အပါအဝင်များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုလက်ခံရရှိ
အခွန်လွတ်: အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့အားလုံးသုံးဘာဘေးဒိုးစ Trusts မှအခွန်ကောက်နှင့်မျှမတာဝန်များကိုပေးဆောင်ကြသည်မဟုတ်။ တစ်ဦးမဲ့ကိုးစားလော့ဘာဘေးဒိုးစအရင်းအမြစ်ဝင်ငွေရရှိနှင့် / သို့မဟုတ်ဘာဘေးဒိုးစမဆိုဒေသခံများမှရန်ပုံငွေ remits အခါသာချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။
IBC ရဲ့များအတွက်အခွန်အခမဲ့ကင်းလွတ်ခွင့်: ဘာဘေးဒိုးစအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများ (IBC) ကဘာဘေးဒိုးစကမ်းလွန် Trust မှပိုင်ဆိုင်သောနှင့်ဘာဘေးဒိုးစအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးန်ဆောင်မှုများအက်ဥပဒေအောက်တွင်စီမံခန့်ခွဲဝင်ငွေအခွန်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။
အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအခွန်ကောက်မ: နေသမျှကာလပတ်လုံးအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများဝင်ငွေရရှိခဲ့သည်ခဲ့သည့်အတွက်ပြက္ခဒိန်နှစ်ကုန်မတိုင်မီယုံကြည်မှုကိုထံမှဝင်ငွေပေးဆောင်နေကြအဖြစ်, ဘာဘေးဒိုးစကိုမဆိုအခွန်စည်းကြပ်မည်မဟုတ်။ သို့သော်အမေရိကန်နိုင်ငံသားများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအခွန်နိုင်ငံများတွင်နေထိုင်သူတို့အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေကြေညာရပါမည်။
Capital ကိုရဖို့အခွန်အဘယ်သူမျှမ: တစ်ဦးယုံကြည်မှုအားဖြင့်ရရှိခဲ့မြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်ကောက်ကြသည်မဟုတ်။
ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း: တစ်ဦးက Trust မှအစိုးရများကသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားတရားရုံးတွင်တရားစီရင်ပိုင်သို့မဟုတ်အမိန့်အားဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိခြင်းမှတည်ထောင်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ဘာဘေးဒိုးစနိုင်ငံခြားအစိုးရများနှင့်တရားရုံးအမိန့်သိမ်းယူမှုမှမိမိတို့ကိုး စား. ကာကွယ်သည့်ဥပဒေများရှိပါတယ်။
အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်း Tool ကို: တည်ထောင်သူနှင့်သူ / သူမ၏အိမ်ထောင်ဖက်ကွယ်ပျောက်သည့်အခါ Trusts မှအိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းများအတွက်စံပြယာဉ်များဖြစ်ကြသည်။ Trusts မှမည်သူမဆိုသူတို့ဒီတော့သို့မဟုတ်မလုပ်ဖို့ခွင့်ရှိသည်ရှိမရှိရဲ့ကွယ်လွန်သူပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အကျိုးစီးပွားတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာတရားစီရင်ရေးစမ်းစမ်းသပ်မှုတွေစားသုံးအကုန်အကျနှင့်အချိန်ကိုရှောင်ကြဉ်။ Trust မှထိထိရောက်ရောက်အိမ်ခြံမြေဆန့်ကျင်တောင်းဆိုမှုများအောင်ထံမှဟောင်းအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်၎င်းတို့၏ဆွေမျိုးသားချင်းထဲကအကိုပိတျထားနိုငျသညျ။
န့်သတ်ချက်များများပညတ်တော်: လိမ်လည်လှည်လွှဲပြောင်းဘို့ကန့်သတ်ခြင်း၏ပညတ်တော်အတိုင်းယုံကြည်မှုကိုသို့လွှဲပြောင်းသည့် နေ့မှစ. သုံးနှစ်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Barbadian အထုံးအဖွဲ့တို့မှာတော့အခြားတိုင်းပြည်ကနေတရားသဖြင့်စီရင်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အရေးယူမှုစတင်များအတွက်ကန့်သတ်မရှိပညတ်တော်အတိုင်းလည်းမရှိ။ (အဆိုပါကွတ်ကျွန်းစုများထဲမှနှစ်နှစ်နှင့်ကွတ်ကျွန်းစုများနိုင်ငံခြားစီရငျခကျြကိုအသိအမှတ်မပြုကြဘူး။ )
မိသားစု Estates ကိုထိန်းသိမ်း: အဆိုပါတည်ထောင်သူ (Settlor) ကိုပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဂေါပကတစ်ဦးယုံကြည်မှု၏ပိုင်ဆိုင်မှုအောက်တွင်သူ / သူမ၏ပိုင်ဆိုင်မှုနေရာပြီးတာနဲ့တည်ထောင်သူရဲ့အမွေခံပိုင်ဆိုင်မှုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ထောင်သူများ၏ဆန္ဒကိုအညီဖြန့်ဝေပါလိမ့်မည်စိတ်ချပါနေကြသည်။
အဘယ်သူမျှမငွေကြေးစနစ်ထိန်းချုပ်မှုများ: Trusts မှသူတို့အားလုံးကိုနိုင်ငံခြားငွေကြေးကိုင်တွယ်ရန်ခွင့်ပြုမဆိုနိုင်ငံခြားငွေကြေးထိန်းချုပ်မှုမှဘာသာရပ်မရှိကြပေ။ ယုံကြည်မှုကိုနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်သည့်အခါဤတစ်ခုတည်းကိုသာနိုင်ငံခြားငွေကြေးအတွက်အပေးအယူအလွန်အသုံးဝင်သည်ကို၎င်း, အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများဘာဘေးဒိုးစပြင်ပတွင်နေထိုင်ကြသည်။
သီးသန့်လုံခြုံရေး: Trusts မှအားလုံးပါတီများအဘို့အပြည့်စုံ privacy ကိုထောက်ပံ့သောအစိုးရနှင့်မမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ချက်များကိုသို့မဟုတ်ဖိုင်စာရွက်စာတမ်းများရှိသည်။
လျှို့ဝှက်: ဘာဘေးဒိုးစဥပဒေများအရ, တကယုံကြည်မှုနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ပြန်အသိပေးခြင်းနေယုံကြည်မှုစီမံခန့်ခွဲနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ Trustee နှင့်မဆိုအခြားသူတွေများအတွက်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Trust မှလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျင့်နိုင်သလား: အတော်များများကတရားစီရင်မှုသာအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်အိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson စုဆောင်းတူသော passive ဝင်ငွေလှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဟာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုလိုအပ်သည်။ ဘာဘေးဒိုးစသူတို့၏နိုင်ငံတကာ Trusts မှတက်ကြွစွာစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါကကမ်းလွန် Trust မှသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိက Trusts မှလျှောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။
ဘာဘေးဒိုးစအဖွဲ့အစည်းများအကျိုးခံစားရသူများဖြစ်နိုင်သည် ဘာဘေးဒိုးစအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်များနှင့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများ (IBC) အကျိုးခံစားခွင့်ရှိနိုင်ပါသည်။
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအဘယ်သူမျှမ: တစ်ဦးကဘာဘေးဒိုးစ Trust မှအဘယ်သူမျှမကအစိုးရမှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်ပုံစံတင်ပို့ရန်အခကြေးငွေနှင့်အတူချက်ချင်းဖွဲ့စည်းထားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်မှတ်ပုံတင်ရန်ရမယ်သူကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Trusts မှအဘို့ဖြစ်၏။
ဘာဘေးဒိုးစကိုး စား. ကြောင့်ရန်ယုံကြည်မှုနှင့်လွှဲပြောင်းရန်ပုံငွေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖန်တီးပေးသူတစ်ဦးတည်ထောင်သူ (Settlor) ရှိသည်။ အဆိုပါယုံကြည်အပ်နှံခြင်းဟာ Settlor ကိုယ်စားသရုပ်ဆောင်, ယုံကြည်မှုကိုစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့်များသောအားဖြင့်သူ / သူမ၏အမွေခံဖြစ်ကြသူ Settlor အားဖြင့်အမည်ရှိသောအကျိုးခံစားရသူများကာကွယ်ပေးသည်။ Trusts မှနောက်ထပ်အကျိုးခံစားရသူများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ Trustee ကြီးကြပ်ဖို့ကာကွယ်ပေးသူကိုခနျ့အပျဖို့ option ကိုရှိသည်။
ဝင်ငွေဘာဘေးဒိုးစအတွင်းရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သို့မဟုတ်ရန်ပုံငွေများဘာဘေးဒိုးစ၏အနေထိုင်သူများမှလွတ်ကြသည်မဟုတ်လျှင် Trusts မှအားလုံးအခွန်ပေးဆောင်ခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။
ကမ်းလွန် Trusts မှအစိုးရနှင့်စာရွက်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်ဖိုင်ရန်မလိုပါ, ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမဝန်ဆောင်ခလိုအပ်သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Trusts မှအစိုးရနှင့်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည်နှင့် $ 1,100 အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်အခကြေးငွေဟာစက်မှုဝန်ကြီးဌာန, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေး, ကုန်သွယ်ရေးနဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီမှပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကတခြားကိုးစားဘို့ယုံကြည်မှုန်ဆောင်မှုများကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုဂ္ဂလိက Trusts မှလည်းမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ပါကအစိုးရအခကြေးငွေများအပြင်နေသောဂေါပကအခကြေးငွေလည်းရှိပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Trusts မှနှင့်အစိုးရနဲ့အတူတင်သွင်းပုဂ္ဂလိက Trust မှမှတ်တမ်းများအများပြည်သူကိုမရရှိနိုင်ကြသည်။ အကျိုးခံစားရသူများများ၏အမည်များလိုအပ်သောတင်သွင်းစာရွက်စာတမ်းများတွင်ထည့်သွင်းဘယ်တော့မှနေကြသည်။
ဘာဘေးဒိုးစသည်၎င်း၏ယုံကြည်မှုအဘို့အစာရင်းကိုင်စံနှုန်းများသတ်မှတ်ရန်နှင့်မျှမတို့စာရင်းစစ်လိုအပ်ချက်များကိုမရှိပါ။ သို့သော်ပုံမှန်ယုံကြည်မှု Chartered ဟာ Settlor နှင့်အကျိုးခံစားရသူများနှင့်၎င်းတို့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးမှတ်တမ်းများနှင့်မှတ်တမ်းများကိုအပြည့်အဝဝင်ရောက်ခွင့်လိုအပ်သည်။
တစ်ဦးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမဲ့ကိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂလိက Trust မှ 24 နာရီအတွင်းအစိုးရနဲ့မှတ်ပုံတင်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဘာဘေးဒိုးစမကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကိုကိုး စား. ရှိပါတယ်။
တစ်ဦးဘာဘေးဒိုးစ Trust မှနိဂုံးဖွဲ့စည်း
ဘာဘေးဒိုးစ Trusts မှအပါအဝင်များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုလက်ခံရရှိ: အငျးမဲ့ကိုးစားအကျိုးခံစားရသူများအဘို့စုစုပေါင်းအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်တစ် Trust မှဘာဘေးဒိုးစအတွက်ဝင်ငွေရရှိတစ်ခုသို့မဟုတ်ဘာဘေးဒိုးစနေထိုင်သူမရှိမြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်, ပြည့်စုံလျှို့ဝှက်ချက်များနှင့် privacy မရှိငွေကြေးထိန်းချုပ်မှု, ပိုင်ဆိုင်မှုဖို့ရန်ပုံငွေ remits သောအခါ, သာချွင်းချက်ဖြစ်ပါသည် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းကိရိယာများ, ကမ်းလွန် Trusts မှမရှိအစိုးရမှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်အင်္ဂလိပ်အရာရှိက language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။